लिगको उपाधिमा चारवटा क्लब भिड्दै, कस्ले मार्ला बाजी ? - Nigranitimes
होमपेज / खेलकुद / लिगको उपाधिमा चारवटा क्लब भिड्दै, कस्ले मार्ला बाजी ?
लिगको उपाधिमा चारवटा क्लब भिड्दै, कस्ले मार्ला बाजी ?
सोमबार, पुष ०६, २०७७ , निगरानी टाइम्स
पुस ६ गते, पथरी । मोरङको पथरीशनिश्चरेमा जारी टेन्सवर्ग पथरीशनिश्चरे फुटबल प्रिमियर लिगको उपाधिको लागि चारवटा क्लब प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ । बाँकी ४ वटा टिम भने उपाधिको लक्ष्यबाट टाढा भईसकेका छन् ।
सेमिफाइनलमा पुगेका शिरिजंगा, द रियल ब्रदर्स, टेन नवोदय र हेरिका न्युस्टार फुटबल क्लवबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो ।
सोमबार भएको लिग चरणको अन्तिम खेलमा टेन नवोदायलाई १—० गोल अन्तरले पराजित गर्दै द रियल ब्रदर्श एफसी समूह बिजेता बनेको छ । लिग चरणको अन्तिम खेलमा द रियल ब्रदर्शका लागि १५ औं मिनेटमा डम्बर मगरले गरेको उत्कृष्ट गोल नै निर्णायक बनेको थियो ।
अगाडिको दुबै खेल जितेको टेन नवोदयको अपराजित यात्रा रोक्दै द रियल ब्रदर्श समूह बिजेता भएको हो । खेलको म्यान अफ द म्याच विजेता द रियल ब्रदर्शका खेलाडि दिपेन माझी घोषित भए ।
समूह चरण पार गर्दै ‘ए’बाट शिरिजंगा ९, हेरिका न्युस्टार ५, समूह ‘बी’बाट द रियल ब्रदर्श ७ र टेन नवोदय ६ अंकसहित उपाधि जित्ने होडमा सेमीफाइनल प्रबेश गरेको हो ।
सेमी फाइनल खेल पर्सि (पुस ८) ‘बी’बाट समूह विजेता द रियल ब्रदश र हेरिका न्युस्टार भिड्ने छन् । त्यसैगरी ९ गते समूह ‘ए’ बिजेता शिरिजंगा र टेन नवोदय एफसी वीच प्रतिष्पर्धा हुनेछ । हेरिका न्युस्टार ‘ए’ र टेन नवोदय ‘बी’को उपबिजेता हो । खेलको फाइनल पुस ११ गते हुने आयोजक समितिको संयोजक संजिप गिरीले बताए ।
खेलमा विजेता टिमले १ लाख ७५ हजार र उपविजेता टिमले ७५ हजार, ट्रफि, मेडल र प्रमाण पत्र पाउने आयोजकले जनाएको छ । प्रिमियम फुटबल लिगमा पथरीशनिश्चरे नगरका ८ वटा क्लबले भाग लिएका थिए । खेलमा वेस्ट गोल रक्षक, वेस्ट डिफेन्स, वेस्ट मिड फिल्डर, वेस्ट फरवाड, वेस्ट प्लेयर, वेस्ट कोच र वेस्ट गोलकर्तालाई पनि ५ हजारको दरले पुरस्कृत गर्ने जनाएको छ ।